Safafka ay caawa ku soo gali karaan kulanka London Derby kooxaha Chelsea iyo Tottenham – Gool FM
Safafka ay caawa ku soo gali karaan kulanka London Derby kooxaha Chelsea iyo Tottenham
(London) 22 Abriil 2017 – Kooxaha ku tartamaya hanashada horyaalka Premier League ee Chelsea iyo Tottenham Hotspur ayaa caawa ku wada ciyaari doona garoonka Wembley ee Magaalada London, midkood ayaana labadan kooxood gaari doonta final-ka FA Cup.
Kooxda tababare Antonio Conte ayaa la filayaa inay kulankan dib u hesho goolhaye Thibaut Courtois iyo xiddigooda Marcos Alonso kuwaasoo labaduba seegay kulankii Man United ay guuldarrada ka soo heleen.
Gary Cahill ayaa la filayaa inuu kulankan seego iyadoo shaki laga galinayo safashada kulankan, kaasoo la malaynayo inuu kulanka London Derby ku seegi doono xanuun.
Tottenham waxaa kulankan diyaar ah weeraryahankeeda Harry Kane, kaasoo ka soo kabsaday dhaawac uu la maqnaa.
Kooxda Spurs ayaan kulankan heli doonin adeega xiddigaheeda Harry Winks, Danny Rose iyo Erik Lamela kuwasoo dhammaantood dhaawacyo qaba.
Haddaba waxaa halkaan hoose ku eegeynaa safafka ay la soo shirtagi karaan labadan kooxood ee Blues iyo Spurs kulankan London Derby:-
Horudhaca kulanka Serie A kooxaha Fiorentina vs Inter Milan